corona – कृषक र प्रविधि
Agri News corona Healines स्थानीय तह
नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को मौद्रिक नीति तयारीमा जुटेको छ । यसक्रममा विभिन्न संघ, संस्था र व्यक्तिहरुसँग सो नीतिमा समावेश गर्नु विषय वस्तुहरु बारेमा राय सुझाव माग गरेको छ । मौद्रिक नीतिले कृषि…
यतिबेला सारा विश्व शून्य अवस्थामा छ । हरकोही मान्छे कोरोनाको सन्त्रासमा बाँचिरहेको छ । लकडाउनको फुर्सदिलो समयले धेरै मान्छेका धेरै कुरा मज्जैले थाहा पाइएको छ । सामाजिक सञ्जालमा छरपष्ट भएका मान्छेका भित्री कुराहरुले को कति…
कोरोना जीवाणुले (कोविड १९) उत्पन्न अकल्पनीय संकटले समग्र विश्वकै आर्थिक , समाजिक क्षेत्रमा नराम्ररी प्रभाव पारिरहेको । यसले पार्ने प्रभाव र यसबाट उत्पन्न हुने समस्या कति हुन सक्ला अनुमान गर्न सकिएको छैन । यसले सिंगो…
गोविन्द घिमिरे विश्व कोरोनासँग लडिरहँदा प्राकृतिकजन्य औषधीय वनस्पति, अर्गानिक खाद्य बजारको अवसर पनि छ । कोभिड–१९ को विषम महामारीको चपेटाले विश्व आक्रान्त भएको निरन्तरताले आज हामी ५८ औं दिन बन्दाबन्दीमा छौं । कोभिड नियन्त्रण उच्चस्तरीय…
बुटवल,१ जेठ । प्रदेश सरकारले काेभिड—१९ बाट प्रभावित किसानलाई राहत प्रदान गर्न कोभिड विशेष कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । साे कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकारले ५१ करोड १४ लाख रुपैंया छुट्याएको छ । आज…
नेपाल सरकार , स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र काठमाण्डौ महानगरपालिकाको आयोजनामा कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार परिसर भित्र भोली अथार्त जेष्ठ १ गते बिहान ११ः०० बजे कोभिड १९को RDT र PCT परीक्षण कार्य हुने भएको…
३० वैशाख, काठमाडौँ । लकडाउनको सदुपयोग गर्दै पर्वत जिल्लाको महाशिला गाउँपालिका वडा न. ३ बालाकोटले बाँझो जमिनमा व्यवसायिक कफी र केरा खेती सुरू गर्ने भएको छ । कृषि क्षेत्रको लागि उपयुक्र्त क्षेत्र मानिने भएकाले सो…
तपाईं हामीले आफ्नो बानीमा सामान्य परिवर्तन ल्याउँदा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण कम हुन सक्ने जनस्वास्थ्यविद् बताउँछन्। काठमाडौं। तपाईं हामीले आफ्नो बानीमा सामान्य परिवर्तन ल्याउँदा पनि कोरोनाको संक्रमण कम हुन सक्ने जनस्वास्थ्यविद् बताउँछन्। जनस्वास्थ्यविद् डा. रवीन्द्र…
दिपेश ढकाल : बिश्व यदि बेला कोरोना भाइरस (कोभिड-19)ले गर्दा लकडाउनमा छ। उसो त नेपालीहरुको मुख्य पेशा भयकै कारण दैनिक व्यवसाय गरिरहेका तथा व्यवसायिक रुपमा कृषि खेती अंगालेका ब्यक्ति तथा युवाहरु पछिल्लो समयमा धेरै संख्यामा…
२२ वैशाख, काठमाडौं । कोरोना भाइरस संक्रमणबाट जोगिन बेला बेलामा हात धुने, गुणस्तरीय सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने सल्लाह चिकित्सकहरुले दिन्छन् । तर, धेरै जनाले एउटै धारा, एउटै साबुन र एउटै स्यानिटाइजरको बट्टा छुनुपर्‍यो भने कोरोना संक्रमणको…